ပိုလန် LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ပိုလန် LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကပိုလန် LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများအတွက်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သကဲ့သို့, ပိုလန် LLC က၎င်း၏ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရား, အကြွေးတွေ, ချေးငွေနှင့်တရားစီရင်ရေးတရားရုံးစီရင်ခံထိုက်ပေသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များတာဝန်ယူမှုကိုရှယ်ယာမြို့တော်၎င်းတို့၏အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ LLC အတွက်ရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ပိုလနျ LLC ရဲ့အုပ်ချုပ်သောပညတ်တရားကိုပိုလနျကုမ်ပဏီမြား Code ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ပိုလန်တရားဝင် "ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်နှင့်အရှေ့ဥရောပမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပိုလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားတွေဟာပိုလန် LLC အတွက်ရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: ရှယ်ယာရှင်များ၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကပိုလန်အတွက် LLC ဖွဲ့စည်းရန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
• အနိမ့်နိမ့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နိမ့်သည်။
• အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရေးဦးတည်းသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရက်ကြာပါသည်။
တစ်ဦးက LLC အခြားမည်သည့်ပိုလန်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုဆင်တူမဖြစ်လတံ့သောနာမည်တစ်ခုရွေးချယ်ရမည်။
တိုင်း LLC ကုမ္ပဏီအမည်ကိုဒီအတိုကောက် "SP နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရပေမည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံ "SP ။ တိရစ္ဆာန်ရုံစာသားဆိုလိုတာကSpółka z ograniczonąodpowiedzialnością, အတိုကောက် "လီမိတက်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ။ "
ပိုလန် LLC ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သည်:
•တစ်ဦး Notary ကငျြ့အဖြစ်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများဖြည့်စွက်;
•ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry မှာအားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry မှာအားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်အပေါ်သို့, တကဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မတိုင်မီကမှတ်ပုံတင်ရန်, LLC သည်တရားဝင်စည်းနှောင်ကန်ထရိုက်ထဲသို့ဝင်နိုင်စွမ်းအတူတက်ခြောက်လများအတွက် "အဖွဲ့အစည်းမှာကုမ္ပဏီ" အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်လိမ့်မည်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်ဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကို "Notary ကငျြ့" ပြင်ဆင်သူတစ်ဦးပိုလန်သက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများ၏ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများဖြစ်စေသည့်ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်သို့မဟုတ်ရှေ့နေချုပ်တစ်ဦး notarized ပါဝါရှိသူ၎င်းတို့၏ရှေ့နေကတိုက်ရိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာများစာရင်းပေးသွင်းမှု၏တစ်ဦးကကြေငြာလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများတွင်အောက်ပါအသေးစိတျပါဝင်ရမည်: ကုမ္ပဏီ, ကုမ္ပဏီလှုပ်ရှားမှုများရည်ရွယ်ချက်, ကုမ္ပဏီရဲ့အသက်တာ၏ကြာချိန်, ရှယ်ယာမြို့တော်၏ပမာဏ, ရှယ်ယာအရေအတွက်နှင့်ရှယ်ယာအမည်ခံတန်ဖိုးကုမ္ပဏီအမည်နှင့်အမျိုးအစား ,.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ LLC ရဲ့ဆောင်းပါးဟာရှယ်ယာရှင်များပံ့ပိုးမှုများကိုသာ, အမြတ်အစွန်းများနှင့်တာဝန်များအပါအဝင်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အပေါငျးတို့သပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုရှယ်ယာရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုသူ / သူမ၏ကုမ္ပဏီရှယ်ယာအလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများ LLC သည်တစ်ဦးနှင့်အချိန်ကာလသို့မဟုတ်အသတ်မရှိ (အစဉ်အမြဲ) အတွက်ဖွဲ့စည်းသည်ရှိမရှိကြေညာရပါမည်။
တစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအနည်းဆုံးရှိပါသည်။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်အခြားတစ်ခုတည်းရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမအများဆုံးကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအဖွဲ့ဝင်များကနောက်ထပ်အနှစ်တစ်နှစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသတ်မရှိဖြစ်စေ၏ရှိရေးရသောလိုအပ်ပါသည်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအဖွဲ့ဝင်များ, ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လိုရှည်လျားအဖြစ်ခန့်အပ်ကြသည်များအတွက်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များပို့ချ၏ထုံးစံ, သူတို့၏စဲဖြစ်နိုင်သူနှင့် ပတ်သက်. အပေါငျးတို့သစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသင့်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ရုံကုမ္ပဏီ၏သာရှယ်ယာရှင်ပါဝင်ပါသည်လြှငျ, တိုင်း resolution ကိုတစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက Proxy (Prokurent) ရောင်းချသို့မဟုတ် encumbering ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများအသုံးပြုခြင်းပေးအပ် မှလွဲ. အားလုံးကိစ္စရပ်များအတွက် LLC ကိုယ်စားပြုဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ proxy ကို LLC သည်ရဲ့မှတ်ပုံတင်သို့ဝငျရမညျ။
LLC သည်အဘယ်သူ၏အာဏာဆောင်းပါးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပါလိမ့်မည်တစ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (စတစ်ခု "စာရင်းစစ်ကော်မတီသည်" ဟုခေါ်) ကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။ ဒါဟာဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကုမ္ပဏီအကြားကန်ထရိုက်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားမှုရဲ့ပြဿနာများကိုမဆိုပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်။
1994 ၏ပိုလန်ရဲ့စာရင်းကိုင်အက်ဥပဒေမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုသေချာကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်စာအုပ်များထိန်းသိမ်းဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အားလုံးစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများပိုလန်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့်ပိုလန်ငွေကြေးအသုံးပြုနိုင်သည်ထားရပါမည်။ balance စာရွက်များနှင့်အခွန်စာအုပ်တွေတိုင်းဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက်ဝင်ငွေ, အကြွေးတွေ, အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြရပေမည်။
လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 5,000 PLN (လက်ရှိ 1,200 ယူရို) ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပေါ်၌အပြည့်အဝငွေသားပမာဏကိုကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာငွေရမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးပါသို့မဟုတ်ပံ့ပိုးမှုများကို၏အစိတ်အပိုင်းများကို "မျိုးထဲမှာ" paid နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးတို့ကတန်ဖိုးဖြတ်ခံရဖို့မရှိပါ။
တဦးတည်းရှယ်ယာများ၏အနည်းဆုံးတန်ဖိုးက 50 PLN ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်ရှယ်ယာရှင်များမှာ '' အစည်းအဝေးပညတ်တရားအောက်၌လိုအပ်ပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်:
1 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ကြိုတင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်, ကုမ္ပဏီစစ်ဆင်ရေး၏ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများခွင့်ပြုချက်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ယုံကြည်မှုမဲပေး;
2 ။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အရောင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခွင့် (စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမယ့်);
3 ။ အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများဖြန့်ဖြူး;
4 ။ ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မဆိုတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကို;
5 ။ ချေးငွေသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအကြွေးတွေ၏ခွင့်ပြုချက်;
6 ။ အဆိုပါဆောင်းပါးထဲမှာအခွင့်အာဏာအပိုဆောင်းငွေပေးချေ၏ပြန်အမ်းငွေ;
7 ။ အဆိုပါဆောင်းပါးများပြည်နယ်ခွင့်ပြုချက်မရှိပါကဝယ်ယူမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေများအရောင်းတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များမှာ '' အစည်းအဝေးကာလအတွင်းမလိုအပ်ပါ,
8 ။ အဆိုပါဆောင်းပါးများအားဖြင့် reserved အခြားကိစ္စရပ်များရှယ်ယာရှင်များမှာ '' အစည်းအဝေးများမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခံရဖို့။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီများ '' Code ကိုအဆိုပါဆောင်းပါးများပိုလန်အတွင်းအခြားတည်နေရာကိုသတ်မှတ်လျှင်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာကျင်းပမည့်အစည်းအဝေးလိုအပ်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များရှေ့နေချုပ်တစ်ဦး notarized ပါဝါအောက်မှာသရုပ်ဆောင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
LLC သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများကဲ့သို့ကော်ပိုရိတ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းကို 19% ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုလန်လည်း 19% သောခွဲဝေအခွန်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးပိုလန် LLC မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ဘို့တစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ကအထိယူပြီးအွန်လိုင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူး, နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်တစ်ဦးအစာရှောင်အွန်လိုင်းတနေ့မှတ်ပုံတင်လိုအပ်မယ့်အနိမ့်: တစ်ဦးကပိုလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။